Jordania: #HashtagDebates (adihevitra momba ny tenifototra) sy Fanavaozàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2018 4:38 GMT
Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia navoaka tamin'ny Martsa 2011
Tao Makan no natao ny #HashtagDebates andiany faharoa nokarakarain'ny 7iber, tao Amman, tamin'ny harivan'ny 7 martsa. Mandray anjara amin'ny fanatevenana ny adihevitry ny daholobe teny anaty tambajotra sy ivelan'ny tambajotra, tamin'ny alalan'ireo fandaharana sy hetsika marobe ny 7iber, media jordaniana tsy miankina, mifantoka amin'ireo tanora.
Avy amin'ny andian-tsarin'ny @7iber
Nanangona an'ireo feo izay niresaka mikasika ny maha-teratany sy ireo fanavaozana ao Jordania ny #HashtagDebates iny alina iny. Ireto ny bitsika vitsivitsy avy amin'ilay fihaonana:
Mpiteny voalohany: @Linashannak manontany raha toa ny olana mikasika ny “fisafidianana tanindrazana” ka fialantsiny iray amin'ny tsy fisiana fanavaozana ao Jordania #reformjo? #hashtagdebates #JO
Mpiteny @jawadabbassi: ny andribe an'ny demokrasia dia rafitra iray fanarahamaso sy fampifandanjàna
Jawad Abbasi: tsy niasa hisian'ny demokrasia ireo antoko tamin'ny taona 50, fa niasa handrodana kosa ny fitondrana.
mpiteny @sufianobeidat: Mila manapa-kevitra ny fanjakana, didy jadona demokratika ve sa tena didy jadona tsotra izao?
@reemalmasri: mpiteny @linashannak manontany hoe “nahoana aho no takian'ny governemanta handray ireo andraikitro ara-tsosialy sy amin'ny maha-olompirenena, fa tsy ireo zoko ara-politika?
Ho an'ny @jawadabbasi, tsy manana demokrasia ny tontolo Arabo saingy tsy mpitondra fotsiny ihany no nahatonga izany. Diso ihany koa ny fiarahamonina.
Mpiteny @sufianobeidat: sakana iray goavana tsy hisian'ny fanavaozana ao Jordania ny tsy fisiana fanarahamaso sahaza avy amin'ny fitsaràna
أنا بشعر أنو الأردن دولة بوليسية، و بعدنا بنخاف نحكي و ننتقد بالشارع، و صار الكل بدو يطلع برة “
Ny tsapako dia Fanjakana Polisy i Jordania, matahotra foana isika ny hiresaka sy hitsikera eny an-dalambe ary te-hivoaka any ivelany avokoa ny rehetra.
@JawazSafar: tsy maintsy hatsaraina ny fifandraisana misy eo amin'ny Fanjakana sy ny governemanta ary ny vahoaka
Izay Jordaniana tonga saina dia tsy mahita an'i Jordania voazara ho Jordaniana / Palestiniana, fa raha ny marina dia mahantra sy mpanankarena, ireo izay afaka mandoa hetra sy ireo izay tsy afaka.
@tarawnah: Fitanisàna fa “dingana 10 any aoriantsika ny governemanta” tena marina, tena mitovy raha resaka faritra
@razano: mikasika ny mri-pamantarana, nahoana ny Jordaniana iray no afaka sady ho Amerikana no Libaney ary Palestiniana?
Raràn'ny lalàmpanorenana tamin'ny taona 1952 ny fanavakavahana eo amin'ireo teratany Jordaniana sy ireo teratany Palestiniana.
blaogera avy ao Irbid (tanàna ao avaratr'i Jordania): Mpanavakavaka saranga ny adihevitra ary tsy miresaka ny olan'ireo Jordaniana any amin'ireo fari-piadidiana sahirana mitady sakafo ho eo an-databatra fa tsy izay maha-Jordaniana.
Tokony ahisantsika ivelan'i Amman andrefana ny fifanakalozan-kevitra
Iray amin'ireo mpandray anjara: ny fandaharam-pampianarana ny tantara any amin'ireo sekolim-panjakana dia ahitana fanasàna atidoha ary mila fanovàna ifotony.
Zavatra heno sy resahintsika ny fangaharahana, saingy tsy misy mampihatra azy akory … mahamenatra.
Ny hevitro dia izao, na misy aza ny fanavaozana ara-politika, hisy foana ao #Jo sy any ivelany ireo fanamby ara-toekarena
Mitovy hevitra aminareo i @DanaZkat, mbola betsaka ny miandry antsika, ny hanoanana sy ny toekarena, ny fitoviana, ny maripamantarana, ny fiainana ara-politika mifototra amin'ireo antoko, fifidianana…
Mba ho fanampim-panazavana misimisy kokoa, azafady araho ny fikarohana Twitter #HashtagDebates, tsiriho ity pejy nokarakarain'ny Meedan ity, sy ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny 7iber.com.
Arabia Saodita 6 andro izay